Afaka mampiasa Apple Pay izahay izao hitehirizana ny maodely 3 | Avy amin'ny mac aho
Afaka mampiasa Apple Pay izahay izao hitehirizany ny maodelintsika 3
Rehefa nanambara ny maodely 3 i Tesla, maro ireo mpampiasa no nandeha haingana tao amin'ny tranokala Tesla mba hitahiry ilay maodely "takatry" voalohany avy amin'ny mpanamboatra amerikana. Na dia ny olana samihafa amin'ny famokarana aza dia manasarotra ny fandefasana ity maodely ity, ny orinasan'i Elon Musk vao avy nanisy fomba fandoavam-bola vaovao ianao amin'ireo safidy azo atao.
Raha te hitahiry Tesla Model 3 isika dia tsy maintsy miditra amin'ny tranonkalany ary mandoa $ 1.000 ho fametrahana. Mandritra ny ora vitsivitsy dia tsy afaka manao famandrihana amin'ny carte de crédit mahazatra antsika fotsiny isika, fa koa afaka mampiasa Apple Pay izahay. Hiseho io safidy io rehefa mampiasa Safari hidirana amin'ny tranokala isika, na amin'ny alàlan'ny Mac, iPhone na iPad.
Hatreto aloha, ny hany safidy fandoavam-bola natolotry ny tranokala Tesla anay hametrahana vola $ 1.000 dia amin'ny alàlan'ny PayPal (orinasa iray izay naorin'ny talen'ny CEO an'ny Tesla) sy tamin'ny carte de crédit Ity fampiharana vaovao ity dia tsy hoe fotsiny Hanamora ny fomba ahafahantsika mitahiry ny Tesla Model 3, fa io koa dia ho loharanom-bola lehibe ho an'i Apple, misaotra ny kaomisiona izay nalaina isaky ny fifanakalozana.
Averina ny petra-bola, angamba satria Ny famokarana Tesla Model 3 dia somary taraiky ao aoriana ary ny fotoana fiandrasana ankehitriny dia raikitra eo anelanelan'ny 12 sy 18 volana, indrindra raha ny momba ny fikirakirana manokana, izay mitondra fanampiny fanampiny. Ny fifandraisan'ny orinasa roa tonta dia iray amin'ny fankahalàna fitiavana tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay nisamboran'ny orinasa tsirairay ny talentan'ny iray hafa, mba hanandramana hamolavola ny rafitry ny mpamily mahaleo tena, izay raha ny teôria dia nitety lavitra lavitra noho ny Cupertino i Tesla. -orinasa mifototra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Afaka mampiasa Apple Pay izahay izao hitehirizany ny maodelintsika 3